>Thit Kaung Ein – Let’s talk tomorrow | MoeMaKa Burmese News & Media
>Save Irrawaddy Initiatives from collective community
ချိုးထောင်၊ ခါနှိုက် လုပ်လာတဲ့ကောင်
ပျော်ရွှင်နေတဲ့ လူအုပ်ကြီးထဲ တိုးဝင်
… ကမ္ဘာစစ်နှစ်ခုနဲ့ ညားခဲ့တဲ့
အနမ်းဟာ ယမ်းနံ မကင်းဘူး
ပိုချစ်ကြရအောင် ဒေလီယာ။ ။
(၂၇. ၁. ၂၀၀၈)
(သရုပ်ဖော်ပုံကို ပန်းချီထိန်လင်းရဲ့ ပန်းချီကားတခု ယူသုံးထားပါတယ်။ ခွင့်ပြုပါ)